E-commerce Business လုပ်ငန်း စလုပ်ရန်သော့ချက် ၅ ချက် - .::just for share::.
Home » ဗဟုသုတ » E-commerce Business လုပ်ငန်း စလုပ်ရန်သော့ချက် ၅ ချက်
E-commerce Business လုပ်ငန်း စလုပ်ရန်သော့ချက် ၅ ချက်
မြန်မာပြည် အတွင်း ဆက်သွယ်ရေး နဲ့ မီဒီယာ ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံ အုတ်မြစ်များ သိသာစွာပြောင်းလည်း လာပါပြီ။ လက်ရှိ အခြေအနေ ထက် ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာ ဖို့ နည်းလမ်းများ တော်တော်ရှိနေပါ သေး တယ်။ ကမ္ဘာ့ဆက်သွယ် ရေးဆိုင် ရာ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ooredoo နဲ့ Telenor က လာမယ့် နှစ် ကာလတွေအတွင်း သူတို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်သွားမယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူတိုင်း သိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့် အင်တာနက် ဆိုင်ရာ စီးပွားလုပ်ငန်းများ ဘယ်လို စ လုပ်ဆောင်သွား တင့်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံ သော့ချက် ၅ ချက် ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. ဘယ်လုပ်ငန်း ဘယ်လို ၀န်ဆောင်မှုမျိုး ကို ပေးမယ်ဆိုတာအရင် ဆုံးဖြတ်ပါ။
လုပ်ငန်းတစ်ခု မစခင် ကြိုတင် စီမံ လေ့လာ ရသလို E-commerce လုပ်ငန်း စတဲ့ အချိန်မှာလည်း တည်ထောင်သူ အနေနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ငန်းမျိုး လုပ်ရမယ်၊ ဘယ်ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဘယ် ကုန်ပစ္စည်း၊ ဘယ်သူ့အတွက်၊ ဘယ်ဈေးနှုန်း နဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ရောင်းမယ်ဆိုိတာကို အရင်တွက်ချက် ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်း တခုဟာ လည်း တမူထူးခြား မှု ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ အရည်အသွေး မျိုးပေါ့။ သူတပါး လုပ်တိုင်း ကိုယ်လည်း အဲဒီ လို စီးပွား လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စနစ်မျိုး မဖြစ်ရပါဘူး။ (ကျွန်တော် တို့ မြန်မာလူမျိုး တွေ တော်တော် သတိထားရမယ့် ကိစ္စ တစ်ခု ဖြစ် ပါတယ်။ )
၂. စာရင်း ထိ်န်းသိမ်းခြင်း
လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ စာရင်း ထိန်းသိမ်းမှု ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်း ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းအ တွက်လည်း ရည်ရွယ်ချက် Target ကို ဖြည့်စည်းပေးမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းမှာ spreadsheet နှင့် ထိန်းသိမ်းထားသော အရောင်း အ၀ယ်သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး Data များ ကို ၀န်ထမ်း များ အားလုံး Centralized Access System လုပ်နိုင်အောင်ထိန်းသိမ်း ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မြန်မာ ပြည်အတွင်း အွန်လိုင်း ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးနေသော ကုမ္ပဏီများဖြစ်တဲ့ Myanmar Mart နဲ့ House တို့လည်း သူတို့ ရဲ့ အရောင်း၊ အ၀ယ် နဲ့ Efficiency Service များကိုလည်း Customer Data ကို အခြေခံ ၍ ဈေးနှုန်း သက်သာစွာ နဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃. မိမိ လုပ်ငန်းကို ကုန်ကျစရိတ် အနည်းဆုံးနှင့် ၀က်ဆိုက်ဒ် ကို တည်ဆောက်ပါ
E-commerce လုပ်ငန်း ဟာ အင်တာနက် ကို အခြေခံပြီး လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ် ပါတယ်။ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ Website ကို ဖွင့်ထားပါ။ ယနေ့ Ecommerce ကုမ္ပဏီကြီး များ အများသုံး နေတဲ့ Domain တွေကတော့် 1and1 ၊ ShopifHYPERLINK "http://www.shopify.com/?rdid=40086749&term=ecommerce&Network=Search&SiteTarget=&mt=p&adid=38421656350&device=c&test=&BOID=united-states-ecommerce-phrase&adpos=1t1&gclid=CInx3PbB9L4CFfOhtAod8QUA6g"y ၊ Godaddy များ အပေါ် အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးသက်တာပြီး လွယ်ကူစွာ နဲ့ Customize လည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိလုပ် ငန်း ဟာ IT ကို အခြေခံပြီး လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့် အခြေခံ ၀က်ဆိုက်ဒ်ရဲ့ သဘောတရားကို နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ လုပ်ငန်း ကြီးလာရင်တော့် IT နည်းပညာကို ကျွမ်းကျင်တဲ့သူများကို အကူအညီတောင်းဖို့လိုအပ်ပါ တယ်။
၄. မိမိ ၀က်ဆိုက်ဒ် ကို အင်တာနက် ယာဉ်ကြော များအောင်လုပ်ပါ။
မိမ်ိရဲ့ လုပ်ငန်း ပိုမို လူသိများ လာ နိုင်ရန် လက်ရှိ Social Media အားလုံးကို အသုံးချ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook, Wordpress, Blogspot, Twitter, Youtube, Linkedin, Pinterest, Flickr, Google + တို့ကို သုံးပါ။
၅။ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုက်နာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း IT နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ချမှတ်ထားပါတယ်။ လုပ်ငန်း မစမီ အခြေခံ သဘောသဘာဝ ကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။
နောက်ဆုံး အရေးကြီးတာကတော့် နံပါတ် ၁ အချက်ပါဘဲ။ မိမိရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဟာ ဘာလည်း၊ ဘာပေးချင်တာလည်း ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင် တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အများ ကြီး ရှိပါတယ်။ ပြသနာကို ရှာပါ။ ပြီးရင် အဲဒီ ပြသနာကို Professional ဆန်ဆန် ဈေးသက်သာ စွာနဲ့ ၀န်ဆောင် မှုပေးပါ။ အောင်မြင်မှု ရလဒ် များ၊ များစွာ တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။